တောင်သမန်သားလေး: June 2016
TubeMate နဲ့ Youtube မှာ ဗီဒီယိုတွေကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရတာ မြန်ဆန်လို့အဆင်ပြေကြတဲ့ မိတ်ဆွေများတွက် TubeMate v2.2.9 ဗားရှင်းအသစ် ကိုအခုဘဲဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
TubeMate v2.2.9 ဒေါင်းယူရန်
မိမိမျက်နှာပေါ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအလံတံဆိပ်လေးနဲ့ လန်းနိုင်တဲ့ FlagFace v2.0.17 Apk
မိမိမျက်နှာပေါ်မှာ နိုင်ငံတကာအလံတံဆိပ်လေးတွေနဲ့ ဒီဇိုင်းလန်းလန်းလေးဖန်တီးနိုင်တဲ့ FlagFace v2.0.17 လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့ အလံများအပြင် ကျန်ေတို့ မြန်မာနိုင်ငံအလံလေးလဲပါဝင်လာပါတယ်။ File Size မှာ 25 MB မျှရှိပြီး Android OS Version 4.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများတွင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Play Store မှာ App တွေကို အကန့် အသတ်နဲ့ ဒေါင်းယူပြီး Lock ခတ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတာသင်သိပါလား?
Play Store မှာ App တွေကို မိမိသတ်မှတ်ထားသလောက်ကို ဒေါင်းပြီးရင် ထပ်ဒေါင်းလို့မရအောင် PIN Lock နဲ့ ခတ်ထားနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းပါ။
မိမိသူငယ်ချင်းဘဲဖြစ်ဖြစ် မိမိရဲ့ ကလေးငယ်တွေဘဲဖြစ်ဖြစ် မိမိဖုန်းကိုကိုင်ပြီး Google Play Store က App တွေ အတင်းဒေါင်းယူလို့မရအောင် Play Store ရဲ့ Setting ထဲမှာ PIN Lock လေးလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ကဲ့လူသိနည်းတဲ့ ဒီနည်းလမ်းလေးကို လေ့လာပြီး ရှယ်သွားပေးလိုက်နော်
Posted by lin linn at 5:09 AM
“Myanmar President Office” နာမည်နဲ့ Viber မှာ Public Chat ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။
Public Chat မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ သတင်းများကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ တင်ပေးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။< သတင်းများကို မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Viber မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် Follow လုပ်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Public Chat Follow လုပ်နည်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်-
Android ဖုန်းကိုင်ဆောင်တဲ့ User များ ဖုန်းကို Power ခလုတ်နှိပ်ပြီး Screen off ထားတဲ့အချိန်မှာ Screen ခဏခဏပြန်ပွင့်တဲ့ error လေးကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်......
အဲ့ဒီ error လေးကို အခုပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးနဲ့ ဖြေရှင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ.....
ဘာကြောင့် အဲ့ဒီလို ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်....
Virus ရှိတဲ့ App & Game တွေသွင်းထားမိခြင်း ၊ သွင်းထားတဲ့ App & Game တွေက မိမိ Device နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း စတဲ့အချက်တွေကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ..။
ဒီပြဿနာလေးကို TrustGo Mobile Security နဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
TrustGo Mobile Security ကိုဒီမှာဒေါင်းပါ
အင်စတောလုပ်ပြီး Security Scanner လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ....
TrustGo Mobile Security မှမဟုတ်ပဲ..
Avira Antivirus Security : စ,တဲ့ ...
အခြား Antivirus ဆော့ဝဲလ်တစ်ခုခုနဲ့လည်းရပါတယ်...
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီကောင်လေးနဲ့အဆင်ပြေလို့ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကိုညွှန်းထားတာပါ.....
Scan စစ်တဲ့အချိန်က သွင်းထားတဲ့ ဆော့ဝဲလ်အနည်း/အများပေါ်မူတည်ပြီး ကြာနိုင်ပါတယ်....
Scan စစ်ပြီးသွားရင်တော့ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ High Risk, Low Risk ဆိုပြီး
တွေ့တဲ့ဖိုင်လေးတွေကို Delete Or Uninstall လုပ်ပစ်လိုက်ပါ....
ဒါဆိုရင်တော့ screen off ထားရင် screen ပြန်ပြန်ပွင့်တဲ့ error လေးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဗျ.....
facebook သုံးတဲ့သူများအတွက် updater Version Facebook v84.0.0.0.60 APK
Android ဖုန်းဘော်ဒါတို့အတွက် ဘော်ဒါတို့၏ မိတ်ဆွေးကောင်း Facebook ဗားရှမ်းသစ်လေဖြစ်တဲ့ facebook application လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အထူးအထွေ ပြောစရာမလိုပါဘူး Facebook ကို ကလေးတွေသိပြီး အခုရှိရင် .... Updated လိုချင်းသူများအတွက် အောက်မှာသာဒေါင်းလိုက်ပါတော့ဗျာ....ဒီကောင်လေး၏ဖိုင်ဆိုဒ်လေးကတော39MB ဖြစ်ပြီး Android OS, Tablet အားလုံးမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းကလစ်သူနဲ့ Service သမားတွေအတွက် မရှိမဖြစ်တဲ့-SuperSU v2.75 beta APK
ပုဂံကီးဘုတ်ကို နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်အဖြစ် သုံးလိုသူများအတွက် True Move H Sim မှ Code ဝယ်ယူနည်းအဆင့်ဆင့်ကို ပုံဖြင့် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Code တစ်ကြိမ် ဝယ်ပြီးရင် ဖုန်းအသစ် မလဲမခြင်း၊ ဖန်ဝဲလ် ဘယ်လိုတင်တင်၊ Reset Data ဘယ်လိုလုပ်ပါစေ ပုဂံကီးဘုတ်ရဲ့ နောက်ဆုံး အပ်ဒိတ်တွေကို အမြဲတမ်း သုံးနိူင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ Code တစ်ခုက ဖုန်းတစ်လုံးသာ အသုံးပြုနိူင်ပါတယ်။
Bagan Keyboard V8.0 ★ ★ ★ http://www.1mobilefonts.com/2016/04/bagan-keyboard.html